रोजगारको केन्द्र दुबईबाट द्रुतगतिमा रोजगार किन हराउँदै गएको छ ? - Jhilko
रोजगारको केन्द्र दुबईबाट द्रुतगतिमा रोजगार किन हराउँदै गएको छ ?
काठमाडौ । मध्यपूर्वको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको दुबईमा व्यावसायिक बृद्धि भइरहेसँगै रोजगार द्रुतगतिमा हराउँदै गएको देखिएको छ । कम्तीमा एक दशक यता दुबईमा द्रुतगतिमा रोजगार हराउँदै गएको देखिएको छ ।
कम्तीमा चार वर्षयता दुबईको गैर तेल क्षेत्रको निजी क्षेत्रको सञ्चालन अवस्था जनवरी गरी लगात तेस्रो महिना खराब रहेको देखिएको आइएचएस मार्किटले जनाएको छ । दुबईको खरिद प्रवन्धक सूचक ५०.६ले तल झरेको छ । यसले बृद्धि खुम्चिएको देखाएको छ । थोक र खुद्रा बिक्रीमा गिरावट आएको मार्किटले जनाएको छ ।
मार्किटका एक अर्थशास्त्री डेभिड ओइनले दुबइको रोजगार उल्लेखनीय रूपमा प्रभावित भएको र १० वर्ष यता द्रुतगतिमा रोजगारको संख्यामा कमी आएको बताए । उनले निकट भविष्यमा बिक्री केही मात्र बढने देखिएको छ ।
दुबईको सबैभन्दा ठूलो बैंक इमिरेट्स एनबीडीले हजारौं रोजगार कटौती गरेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स समग्रमा दुबई एक भाग रहेको छ । समग्र इमिरेट्समा गत महिनामा व्यवसायको अवस्था पहिलो पटक यति खुम्चिएको देखिएको हो ।
क्षेत्रीय भूराजनीतिक तनावका कारण दुबईको पर्यटन र यात्रा उद्योग जनवरीमा हलुका सुधार देखिएको मार्किटले जनाएको छ । यसमा थप प्रभाव चीनको कोरोनाभाइरसले पारेको प्रभाव पनि रहेकोछ ।
सन् २०२०मा आयोजना हुने भनिएको द वल्र्ड एक्सपो पनि प्रभावित हुने देखिएको छ जसलाई दुबईलाई फर्काउन गाह्रो छ । इमिरेट्सको यो वर्षको खर्च १७ प्रतिशतले बढेर जाने देखिएको छ भने अर्थतन्त्र विस्तार ३.२ प्रतिशतले हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुबईको रोजगार बजारलाई माथि उकास्न अझ केही समय लाग्ने मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिकासम्बन्धी इमिरेट्स एनबीडीका अनुसन्धान प्रमुख खतिजा हकले जनाएकी छिन् ।
तेलका ठूला व्यापारी गोबर ग्यास जस्ता उर्जा परियोजनामा लगानी लगाउँदै
सिन्धुपाल्चोकका एक सय जनामा कोरोना भाइरसको लक्षणसँग मिल्ने स्वास्थ्य समस्या
माग बढी भएका कारण विद्युत् व्यवस्थापनमा प्राधिकरणलाई थप जटिलता पैदा भएको छ । काठमाडौँ...
हरेक ४० सेकेण्डमा एक जनाको आत्महत्या !
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार औसतमा हरेक ४०...
विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध
केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट...
बाजुरामा ३० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न
असारको मध्यभागमा आइसक्दा पनि पानी नपर्दा खेतीयोग्य जमीनमा पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ...